Ciidamada Dowladda ayaa lagu eedeeyey in ay weerar ku qaadeen Hotel ay deggen yihiin madaxdii… – Hagaag.com
27 Febraayo 2021 in Sports // Manchester City ayaa gaartay guul aad u weyn kadib markii 2-1 ay kaga badisay West Ham…
27 Febraayo 2021 in English // Yemen’s children starve as U.N. seeks billions to avoid vast ‘man-made’ famine…
27 Febraayo 2021 in English // Runaway schoolgirl who joined IS cannot return to Britain, top court says…
27 Febraayo 2021 in Dhaqaalaha // Electricity needed to mine bitcoin is more than used by ‘entire countries’…
27 Febraayo 2021 in Dhaqaalaha // Low gold prices spark flurry of activity in India…
Ciidamada Dowladda ayaa lagu eedeeyey in ay weerar ku qaadeen Hotel ay deggen yihiin madaxdii…
Posted on 19 Febraayo 2021 by Admin in National // 0 Comments
Ciidamada Dowladda Somalia ayaa la heegay in ay weerareen Hotel Maa’ida ee Magaalada Muqdisho, oo ay degan yihiin Madaxweyneyaashii hore ee dalka, Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno kale oo ka tirsan Midowga Musharaxiinta.
Dagaalka ayaa bilowday, ka dib markii Ciidamada Dowladda ay weerareen ciidan taabacsan Midowga Musharaxiinta oo ku sugana aagga Taalada Daljirka Dahsoon, halkaaso uu Hotel Maa’ida (Ex Naasa Hablood 2) ku yaalo.
Dagaalka oo hubka noocyadiisa kala duwan leysku adeegsaday ayaa qalqal ku abuuray bulshada ku dhaqan Degmooyinka Boondheere, Shangaani, Xamar Weyne, Warta Nabadda iyo degmooyinka kale ee ku dhow dhow.
Xaaladda Magaalada Muqdisho ayaa ah mid kacsan, waxaana laga cabsi qabaa in dhinacyadu ay markale wada dagaalamaan.
Madaxweynihii hore ee Somalia, Shariif Sheekh Axmed ayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyay in uu bixiyay amarka lagu soo weeraray.
“Waxaan ummadda Soomaaliyeed u caddeynayaa in weerar gardarro ah ay nagu soo qaaday dowladda, iyagoo ku soo duulay Hotelka Maa’ida, oo aniga, Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka mid ah Midowga Murashaxiinta aan deganahay. Weerarka waxaa amray Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Farmaajo, isagoo doonaya in uu na caburiyo. Xoogna uu ku muquuniyo shacbiga Soomaaliyeed ee doonaayo in aragtidooda udhiibtaan si nabad ah.” Ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna yiri “Ciidanka Dowladda ayaa weerar ku soo qaaday Hotel Maa’ida, oo aan ku sugannahay aniga iyo Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Ahmed.”
Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dhacdadaasi ka hadlay ayaa yiri “Weerarka lagu qaaday Hotel Maa’ida oo ay degan yihiin labada Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, waa dulmi iyo gardaro cad oo uu soo qaaday taliska xilkiisu dhacay ee ina Farmaajo. Waxaan ugu baaqayaa shacabka Muqdisho in ay dulmiga iska daafacaan.”
Xasan Cali Khayre, Ra’iisal Wasaarihii hore ee Somalia ahna Musharax Madaxweyne ayaa dhankiisa waxaa uu yiri “Guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqayaa inay adkeeyaan midnimadooda bulsho, ayna si wadajir ah meel uga soo wada jeestaan xukunka ku dhisan kali-talisnimada ee dhaxalkiisa aan horey u soo aragnay.”
About Admin (13261 Articles)
Yemen’s children starve as U.N. seeks billions to avoid vast ‘man-made’ famine…
Runaway schoolgirl who joined IS cannot return to Britain, top court says…
Biden orders airstrikes against infrastructure used by ‘Iranian-backed militant groups’ in Syria…
Manchester City ayaa gaartay guul aad u weyn kadib markii 2-1 ay kaga badisay West Ham…
Novak Djokovic ayaa ku guuleystay ciyaartii Tennis-ka ee Australian Open kadib markii…
Liverpool ayaa la kulantay guuldaradii afraad ee isku xigta ee Premier League Ingriiska kadib…
Maxkamad ku taal Ingriiska ayaa xabsi daa’in ku xukuntay Xuseen Yuusuf oo lagu helay inuu dilay…
Dalka Japan ayaa magacaabay jagada wasiirka cidlada si uu wax uga qabto isdilka kor u kacay…
Waa kuwama ciidamada ugu awooda badan adduunka? xageyse Somalia kaga jirtaa?…